वैद्य माओवादी चुनावमा, मुठी चिह्न लिएर भिड्ने – Etajakhabar
वैद्य माओवादी चुनावमा, मुठी चिह्न लिएर भिड्ने
काठमाडौं । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीको बिहीबार सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठिकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको उक्त पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उपयोग गर्ने रणनीतिअनुसार सहभागी भएको थियो । संविधानसभा बहिष्कार गरी संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै मुठी चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने भएको आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीको गत वर्ष सम्पन्न केही समितिको बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप क्रान्तिकारी माओवादीले पार्टीका वरिष्ठ नेता सीपी गजुरेलको अध्यक्षतामा चुनावी मोर्चा बनाएको हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०६, २०७४ समय: ७:३४:१७
सोनम तामाङकी श्रीमती ग्याल्मोलाई भगाएकै कारण जंगबहादुरको हत्या !
पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक ५० हजार भत्ता पाउने, पूर्व-प्रधानमन्त्रीले नपाउने
एसइई को नतिजा प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि : एउटै विद्यार्थीको दुई दिनमा दुई मार्कसिट !
मलेसियामा विदेशी कामदारः अवैध रकम असुल्ने १० कम्पनी अनुसन्धानमा
प्रदीपको अगाडी अनमोललाई डोमिनेट गरिन रेखाले ! भन्छिन् ‘ अनमोल भन्दा प्रदीप धेरै माथि’ (भिडियो)
वैदेशिक रोजगारीमा ओमान गएका पल्टु दश वर्षदेखि सम्पर्कविहीन
गोरखामा आफ्नै गोठको गाईलाई चिर्पटले हानेर तड्पाई तड्पाई मारी गाई काट्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्यो, केहि फरार
लगातार बढेको गर्मीले जनजीवन प्रभावित, अत्याधिक गर्मी भएपछि बालबालिका र वृद्धवृद्धामा देखिए यस्ता समस्या
पटकपटक पहिरो खस्ने क्रम नरोकिँदा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रभावित , बिचबाटोमै हजारौ यात्रीलाई सास्ती
कोशी टप्पुबाट आएको हात्तीले आक्रमण गर्दा भुनियादेवीको मृत्यु
६ हफ्ता मात्र नेपाल घुम्न आएकी अस्ट्रेलियन युवती ‘एमी फाल्जो’ जो नेपाली गित दुरुस्तै गाउदै भन्छिन, मलाई नेपालीहरु एकदम राम्रो लाग्यो’ (भिडियो)